15 UJehova wakhuluma noMose no-Aroni, wathi: 2 “Khulumani nabantwana bakwa-Israyeli, nithi kubo, ‘Uma noma imuphi umuntu ecucuza+ esithweni sakhe sobulili, umcucuzo wakhe ungcolile. 3 Lokhu kuyoba ukungcola kwakhe ngomcucuzo wakhe: Kungakhathaliseki ukuthi isitho sakhe sobulili siphume umcucuzo noma umcucuzo wakhe uvimbekile esithweni sakhe sobulili, uwukungcola kwakhe. 4 “‘Noma yimuphi umbhede umuntu ocucuzayo angase alale kuwo uyoba ongcolile, futhi noma iyiphi into angase ahlale phezu kwayo iyoba engcolile. 5 Futhi umuntu ongase athinte umbhede wakhe kufanele ahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe.+ 6 Noma ngubani ohlala phezu kwento umuntu ocucuzayo abehlezi phezu kwayo kufanele ahlanze+ izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. 7 Futhi noma ngubani othinta inyama yomuntu ocucuzayo+ kufanele ahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe.+ 8 Ngokuqondene nomuntu ocucuzayo okhafulela ohlanzekile, kumelwe ahlanze izingubo zakhe futhi ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. 9 Noma yisiphi isihlalo sehhashi+ umuntu ocucuzayo abegibele kuso siyoba esingcolile. 10 Noma ngubani othinta noma yini okwenzeka ukuba ibe ngaphansi kwakhe uyoba ongcolile kuze kuhlwe; futhi lowo okuthwalayo uyohlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. 11 Noma ngubani ongase athintwe ocucuzayo+ lapho engazange aziyakaze izandla zakhe ngamanzi kumelwe ahlanze izingubo zakhe futhi ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. 12 Isitsha sobumba umuntu ocucuzayo angase asithinte kumelwe sephulwe;+ futhi noma yisiphi isitsha esenziwe ngokhuni+ kufanele siyakazwe ngamanzi. 13 “‘Manje uma kwenzeka umuntu ocucuzayo eba ohlanzekile emcucuzweni wakhe, khona-ke kumelwe azibalele izinsuku eziyisikhombisa zokuhlanzwa+ kwakhe, futhi ahlanze izingubo zakhe ageze nomzimba wakhe ngamanzi agelezayo;+ khona-ke uyoba ohlanzekile. 14 Ngosuku lwesishiyagalombili kufanele azithathele amahobhe amabili+ noma amaphuphu amabili amajuba, eze phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana awanike umpristi. 15 Umpristi kumelwe awanikele, elinye libe umnikelo wesono, elinye libe umnikelo wokushiswa;+ umpristi kumelwe amenzele isihlawulelo phambi kukaJehova ngokuphathelene nomcucuzo wakhe. 16 “‘Manje uma kwenzeka kuphuma isidoda+ endodeni, khona-ke kumelwe igeze wonke umzimba wayo ngamanzi ibe engcolile kuze kuhlwe. 17 Noma iyiphi ingubo nanoma isiphi isikhumba okuphumele kuso isidoda kumelwe sihlanzwe ngamanzi futhi sibe esingcolile kuze kuhlwe.+ 18 “‘Ngokuqondene nowesifazane indoda engase ilale naye bese kuphuma isidoda, kumelwe bageze ngamanzi babe abangcolile+ kuze kuhlwe. 19 “‘Uma kwenzeka owesifazane acucuze, futhi umcucuzo osenyameni yakhe ube yigazi,+ kufanele aqhubeke izinsuku eziyisikhombisa ekungcoleni+ kwakhe kokuya esikhathini,+ futhi noma ngubani omthintayo uyoba ongcolile kuze kuhlwe. 20 Noma yini angase alale phezu kwayo ekungcoleni kwakhe kokuya esikhathini iyoba engcolile,+ futhi noma yini angase ahlale phezu kwayo iyoba engcolile. 21 Noma ngubani othinta umbhede wakhe kufanele ahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe.+ 22 Noma ngubani othinta noma iyiphi into abehlezi phezu kwayo kufanele ahlanze izingubo zakhe, futhi ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe.+ 23 Futhi uma kuwukuthi ubehlezi phezu kombhede noma phezu kwenye into, ngokuyithinta+ kwakhe uyoba ongcolile kuze kuhlwe. 24 Uma kwenzeka ukuba indoda ilale naye futhi ukungcola kwakhe kokuya esikhathini kuba kuyo,+ khona-ke iyoba engcolile izinsuku eziyisikhombisa, futhi noma yimuphi umbhede engase ilale kuwo uyoba ongcolile. 25 “‘Ngokuqondene nowesifazane, uma kwenzeka umcucuzo wegazi lakhe wopha izinsuku eziningi+ lapho kungesona isikhathi esivamile sokungcola kwakhe kokuya esikhathini,+ noma uma kwenzeka opha isikhathi eside kunokungcola kwakhe kokuya esikhathini, zonke izinsuku zomcucuzo wakhe ongcolile ziyoba njengezinsuku zokungcola kwakhe kokuya esikhathini. Ungcolile. 26 Noma yimuphi umbhede angase alale kuwo nganoma yiziphi izinsuku zomcucuzo wakhe uyoba kuye njengombhede wokungcola kwakhe kokuya esikhathini,+ futhi noma iyiphi into angase ahlale phezu kwayo iyoba engcolile njengokungcola kokuya kwakhe esikhathini. 27 Noma ngubani okuthintayo+ uyoba ongcolile, futhi kumelwe ahlanze izingubo zakhe futhi ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. 28 “‘Nokho, uma eye wahlanzeka emcucuzweni wakhe, uyozibalela izinsuku eziyisikhombisa, kamuva abe ohlanzekile.+ 29 Ngosuku lwesishiyagalombili kufanele azithathele amahobhe amabili+ noma amaphuphu amabili amajuba, awalethe kumpristi emnyango wetende lokuhlangana.+ 30 Umpristi kumelwe enze elinye libe umnikelo wesono elinye libe umnikelo wokushiswa;+ umpristi amenzele isihlawulelo+ phambi kukaJehova ngokuphathelene nomcucuzo wakhe ongcolile. 31 “‘Kumelwe nigcine abantwana bakwa-Israyeli behlukanisiwe nokungcola kwabo, ukuze bangafi ekungcoleni kwabo ngokungcolisa kwabo itabernakele lami, eliphakathi kwabo.+ 32 “‘Lona ngumthetho ophathelene nendoda ecucuzayo+ nendoda okungase kuphume kuyo isidoda+ kanjalo ibe engcolile; 33 nowesifazane osesikhathini+ ekungcoleni kwakhe, nanoma ngubani ocucuzayo,+ kungakhathaliseki ukuthi owesilisa noma owesifazane, noma yindoda elala nowesifazane ongcolile.’”